महिला-महिलाबीचको बिबाहलाई नेपाली अदालतले मान्यता दिएको त्यो क्षण ! – " सुलभ खबर "
महिला-महिलाबीचको बिबाहलाई नेपाली अदालतले मान्यता दिएको त्यो क्षण !
सुमन पन्त । मेरी श्रीमती लेस्ली र मैले स्नातक पछि नेपाल फर्कने निर्णय गर्यौ । हामीले सन् २०१५ मा संयुक्त राज्य अमेरिकामा विवाह गर्यौ । नेपालको संविधान जारी भएको केही महिना पछि, नेपालमा लैङ्गिक र यौन अल्पसंख्यकहरूको अधिकार सुनिश्चित भयो ।
नेपाल आउनु भनेको कुनै गाह्रो कुरा थिएन । हामीहरू फर्किएपछि के गर्ने भन्ने बारे हामीले केही विचार गर्यौ । संविधानले हाम्रो अधिकार सुरक्षित गरेकोले हामीले त्यस्तो कानुनी मुद्दा हुने कुरामा सोचेनौं । नेपालमा समान लिंग जोडीको रूपमा बस्ने । अझै, हामीलाई केहि चिन्ताहरू थिए, पहिलो के हामीले एउटै कोठामा भएको नाटक गर्नु पर्छ ? के हामी हाम्रो सम्बन्ध प्रकट गर्छौं ? के हामी सामाजिक प्रतिबन्ध, वा नराम्रो हिं साको सामना गर्नेछौं ? के यो काम गर्दछ ? लगायत धेरै प्रश्नहरु मनमा उब्जेका थिए ।
एक पटक जब हामी यहाँ आएका थियौं, हामी खुशीले आश्चर्यचकित भयौं कि संक्रमण कत्तिको सहज भयो । जब हामीले बस्ने कोठा खोज्यौं, कोठरीमा रहनु गलत लाग्यो, त्यसैले हामीले हाम्रा घरबेटी (घरमालिक) लाई हाम्रो सम्बन्ध बारे बतायौं । उनले यो भनेनन्, ‘यो तपाईको जीवन हो, जे पनि तपाईलाई खुशी बनाउँछ गर्न सक्नुहुन्छ ।’
यो केवल हाम्रा घरबेटीका लागि मात्र होईन, प्रायः जसो हाम्रो विरुद्धमा सामाजिक पूर्वाग्रहको बारेमा हाम्रो आशंका गलत थियो । हामी खुला थियौं, जोडीको रूपमा मानिससँग सम्पर्क गर्न सक्षम थियौं र नेपालमा हाम्रो जीवनको बारेमा सहजै थियो ।
यस कदमको सामाजिक पक्ष एक कुरा थियो भने कानूनी अर्को थियो । लेस्लीलाई नेपालमा प्रत्येक क्यालेन्डरमा ५ महिना भन्दा बढीको लागि पर्यटन भिसा चाहिन्छ । अब जब संविधानले लैङ्गिक र यौ न अल्पसंख्यकहरूको अधिकार सुरक्षित गर्यो, हामीले सोचेको थियौ कि विवाह भिसा पाउन कुनै समस्या हुँदैन । हामीसँग सबै आवश्यक कागजातहरू थिएर हामीले कानुनी आवश्यकताहरू पूरा गरेका थियौं कि नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने कुनै पनि विदेशी गैर–पर्यटक विवाह भिसाका लागि योग्य हुन्छ ।
अध्यागमन कार्यालयको हाम्रो यात्रा रमाइलो थियो, सबै कर्मचारीहरु हामीलाई राम्रो लाग्थ्यो, र ती मध्ये केही समलि ङ्गी विवाहको विचारसँग परिचित थिएनन्, हामीले अस्थिर वा भेदभावको महसुस गरेनौं । वरिष्ठ अधिकारीहरूले हामीलाई बैठकको लागि बोलाए र हाम्रो अवस्थाबारे बुझेपछि हामी विवाहित भिसाका लागि योग्य छौं भन्ने लाग्यो । हामीलाई भनिएको थियो कि भोलिपल्ट लेस्लीले उनको भिसा पाउँने छ ।
उनका बारेमा प्रश्नहरू थिए कि पति को थियो र श्रीमती को ? के हामी तेस्रो लिं गी थियौं, र के मैले अन्यलाई तेस्रो लिं गीको रूपमा नयाँ नागरिकताका लागि आवेदन दिन सक्छु ? मलाई लाग्दैन कि लिं ग र का मुकता बीचको भिन्नताको बारेमा हाम्रा उत्तरहरू राम्ररी बुझियो । यद्यपि यस बीचमा कतै पनि भेदभावको कारण हुन सकेन र लेस्ली र म दुबै यसको लागि कृतज्ञ छौं ।
सरकारी अधिकारीहरूसँगको भेटको क्रममा एक राष्ट्रिय दैनिकका पत्रकार उपस्थित थिए । एक पटक लेस्लीले उनलाई विवाहको भिसा दिने निर्णय बारेमा कथा लेख्न सक्छन् कि भनेर सोधिन् । हामीले यसको बारेमा धेरै सोचेनौं–यस्तो देखिन्थ्यो कि सबै ठीकठाक हुँदै थियो । अवरोधमा, हामीलाई थाहा हुनुपर्दछ कि यो सहि हुन एकदम सजिलो थियो ।
सभा पछि बिहान हामी हजारौंले पढेको अखबारको दोस्रो पानामा थियौं । मलाई बधाई दिन मैले परिवार र साथीहरूबाट पत्रिकाका पाठहरू प्राप्त गरें, तर मैले मेरो भिट्रियोलको साझा हिस्सा पनि पाएँ–ति व्यक्तिले मलाई परिवारको नाम बदनाम भएको बताए । लेखको एक संस्करण अनलाइन उपलब्ध थियो र जब म टिप्पणी वर्गको माध्यमबाट नेपाली समाजको क्रो धको सामना गर्न हिचकिचाउँथें, अन्ततः मेरो जिज्ञासाले मलाई अझ राम्रो बनायो र मैले भनेको कुरालाई नियालेर हेरें ।
धेरै टिप्पणीहरू विशिष्ट थिए , समलैं गिकता एक पश्चिमी अवधारणा हो र ‘डलरवादी’ षड्यन्त्र हो । लेस्ली नेपाली नागरिकताको लागि नेपालमा थियो । हाम्रो विवाह लाजम र्दो थियो, हामी नेपाली समाज र जनतालाई प्रभावित गर्दै थियौं । हामीले अरुलाई यस्तो विहे गर्न प्रोत्साहित गर्यौ भन्ने आरोप पनि लाग्यो । होमोस आदि को रूपमा लिन थालियो ।
मैले सबैभन्दा बढी पाएको विविधता–हामी अक्सर सोच्छौं कि युवा, शिक्षित, शहरी व्यक्ति प्रगतिशील छन् जबकि वृद्धहरू रूढीवादी छन् । मैले केहि युवा टिप्पणीकारहरू भेट्टाए जसले मलाई नामले बोलाउँथे, मलाई निर्वासन हुनुपर्छ भन्थे, जबकि केही बुढा व्यक्तिहरूले मलाई बधाई दिए र मलाई सफलताको लागि शुभकामना थिए । मैले महसुस गरे कि सहिष्णुता, समावेशीकरण, र स्वीकृति सधैं आउँदैन जहाँबाट तपाईले बढि आशा गर्नुहुन्छ । कहिलेकाँही हामी अज्ञानतालाई असहिष्णुताको रूपमा बिर्सन्छौं, र कहिलेकाँही हामी त्यहि असहिष्णुतामा लिप्त हुन्छौं जब हामी अन्य व्यक्तिको मान बुझ्दैनौं ।
यो खबर पाएपछि पनि अध्यागमन अधिकारीहरूले हामीलाई बताए कि विवाह भिसामा कुनै समस्या थिएन तर तिनीहरू दुई कदम पछाडि लागे । उनीहरूले भने कि उनीहरूले हाम्रो भिसा स्वीकृत गर्न सक्दैनन् र उनीहरूले हाम्रो फाईल गृह मन्त्रालयमा पठाएका छन् किनकि उनीहरूलाई हाम्रो केसको बारेमा कस्तो व्यवहार गर्ने थाहा छैन । हाम्रो कहानी सामाजिक सञ्जालको दायरामा प्रवेश गरेको थियो, र हाम्रो का मुकता अचानक सार्वजनिक बहसको विषय भयो ।
अध्यागमन कार्यालयले हाम्रो मुद्दा पार गरिसकेपछि, हाम्रो साप्ताहिक गृह मन्त्रालयको यात्रा सुरु भयो । हरेक हप्ता हामी मन्त्रालय धाउँन थाल्यौँ । हामीलाई सल्लाह दिइयो कि सिंहदरबारमा प्रवेश गरेपछि हामीले केस सुल्झाउनका लागि हाम्रो फाइल पछ्याउनु भनेको पहिलो कार्य थियो । फाइल पछ्याउनु केसलाई सुल्झाउने सबैभन्दा राम्रो रणनीति हो जस्तो लाग्यो । त्यसैले हामीले निर्णय गर्यौं कि नौकरशाहहरूको लागि अथक खोजी गर्नु नै मार्ग हो ।
हामीले निर्णय गर्न को लागी दुई महिना बितायौं, प्रत्येक चोटि जब हामी एक उच्च–स्तरका अफिसरसँग कुरा गर्ने मौका पाउँथ्यौं जसले हाम्रो केसको बारेमा सुन्थे, प्रतिक्रिया थियो, ‘तपाईको केस एक उदाहरण हो, हामीले यसलाई हेर्यौ । हो, निर्णय गर्न हामीले फेरि भेट्नु पर्छ।’ दुई महिना भन्दा लामो समय लागेपछि, गृह मन्त्रालयले हाम्रो मामला कानून मन्त्रालयमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गर्यो ।
अब हाम्रो नोकरशाही नाच कानून मन्त्रालय संग जारी गर्यो । हाम्रो फाईल अनुसरण गरेको झन्डै एक महिना पछि हामीलाई भनियो कि मन्त्रालयले अघिल्ला केसहरुमा निर्णय गर्ने अधिकार छैन र हामीले आफ्नो मुद्दा अदालतमा हाल्नु पर्छ ।
यो सोच्दा अचम्म लाग्दो छ कि कर्मचारीहरूलाई थाहा थिएन कि मन्त्रालयहरूसँग निर्णय लिने अधिकार छैन । उनीहरू हाम्रो केस जान्दछन्, उनीहरू कानून जान्दछन्, त्यसोभए उनीहरू किन अन्तमा त्यस्तो लामो समय सम्म फाइल रोकेर बस्छन् ? के उनीहरूलाई के गर्ने थाहा छैन ? किन उनीहरूले सुरुमै आदालत जाउ भन्ने जवाफ दिएनन् ? ताकि हामी हाम्रो मुद्दा जारी राख्न सक्दछौं ।
हामी बुझ्दछौं कि कर्मचारीहरुले ठोस जवाफहरू दिनु अघि आइएस र टिएस पार गर्नुपर्छ । तर यस्तो लाग्थ्यो कि त्यहाँ लुकेका नियमहरू छन् । हामीले सबै कानुनी आवश्यकताहरू पूरा गर्यौं तर उनीहरू डराएर निर्णय गर्न चाहेनन् ? यो त्यस्तो चीज हो जुन मैले बुझिन जुन मलाई लाग्दैन र तिनीहरू पनि थाहाँ थिएनन् । म उनीहरूलाई आफ्नो प्रारम्भिक निर्णयबाट फर्किएको तथ्यको लागि कुनै पनि गुनासो महसुस छैन । मलाई थाहा छ कि उनीहरूले हाम्रो जीवनलाई कठिन बनाउन वा कुनै पनि हालतमा चोट पुर्याउन कोशिस गरिरहेका थिएनन् । वास्तवमा, सन् २०१७
को शुरुमा अध्यागमन कार्यालय र मन्त्रालयहरूमा सबै अधिकारीहरूले हाम्रो मामलामा धेरै समानुभूति राखेका थिए । यद्यपि, यी अदृश्य सीमाहरू हुन् जुन हामीले समाजको रूपमा अनुसरण गर्छौं, अदृश्य पर्खाल जुन हामी पार गर्न सक्दैनौं । जब हामीलाई थाहा हुन्छ कि अर्को छेउमा त्यस्तै विश्व छ । यदि कसैले यसलाई उद्देश्यपूर्ण रूपमा हेर्छ भने, यो हास्यास्पद देखिन्छ, तर यो अदृश्य पर्खाल काँडे तारको साथ कुनै ढुङ्गाको पर्खाल जत्तिकै बलियो छ । सायद यो पनि बलियो छ किनकि यो ब्रेक गर्न गाह्रो छ।
यो हाम्रो लागि गाह्रो र तनावपूर्ण समय थियो । एक जोडीको रूपमा नेपालमा बाँच्ने हाम्रो क्षमता कसैले कागजमा हस्ताक्षर गरेर हामीलाई अनुमोदन गर्नेमा निर्भर थियो । हुनसक्छ, हामीलाई चाहिएको व्यक्तिले गैर–विपरीतलिं गी सम्बन्धको अवधारणालाई बुझ्दैन । यस कठिन समयको क्रममा हामी हावामा र अलि विचलित हुँदैमा निर्भर भयौं किनभने हामीले नेपाली कर्मचारी चलाउन सकिनौँ ।
मार्च २०१७ को अन्तिममा हामीले अध्यागमन कार्यालयको बिरूद्ध मुद्दा हालेका थियौं । प्रारम्भमा, सर्वोच्च अदालतमा रजिस्ट्रारको कार्यालयमा जानु कठिन थियो किनकि उनीहरूले हाम्रो मुद्दा दर्ता गर्न अस्वीकार गरे । भाग्यवस, मैले एक नेपाली वकिललाई भेटे जो लैं गिक अल्पसंख्यकहरूको संरक्षणको लागि वकालत गर्दै आएका थिए र हामीलाई प्रो–फ्री कन्सल्टेन्टको रूपमा मद्दत गर्ने प्रस्ताव राखे । उनको मद्दतले हाम्रो वकिलले मुद्दाको थप विकसित गर्न सक्षम भए । रजिस्ट्रारको कार्यालयले अन्ततः मुद्दा स्वीकार गर्यो र हाम्रो कानूनी यात्रा सुरु भयो । हामीले अध्यागमन कार्यालयको बिरुद्द मुद्दा हालेका थियौं कि उनीहरूले हाम्रो अधिकारलाई सम्मान गर्दैनन् र विवाह भिसाका सम्बन्धमा आफ्नै नीति अनुसरण गर्दैनन् ।
यो समयको बिरूद्धको खोजी थियो, लेस्ली नेपालमा धेरै समयसम्म बस्न सकेन र न्यायिक प्रणालीसँगै आउने विभिन्न प्रक्रियाहरूले लामो समय लिन सक्दछ । अदालतले अध्यागमन कार्यालयलाई हाम्रो अनुरोध किन स्वीकृत भएको छैन भनेर वर्णन गर्न भन्यो । ४५ दिनपछि, अदालतले महानिर्देशकबाट अर्को पत्र चाहान्थ्यो । थप अर्को ४५ दिन । नेपालमा लेस्लीको समय सकिसकेको थियो, र हामीले निर्णय गर्यौं कि हामीले देश छोड्नुपर्छ । ताकि हामी अदालतमा सुनुवाईका लागि नेपालमा केही दिन बस्न सक्नेछौं । यस बीच, हाम्रो अद्भुत वकिलहरूले मुद्दामा काम गरिरहे । लेस्लीलाई नेपालमै बस्नको लागि हाम्रो अनुरोधलाई अस्वीकार गर्यो । जब अदालतमा मुद्दा चलिरहेको थियो, तर उनीहरुले अस्वीकार गरें । मैले मुद्दा हालेको थिए र लेस्ली अभियोगी थिइनन्, त्यसैले उनले नेपालमा लामो समयसम्म बस्न अनुरोध अस्वीकार गरेको देखियो ।
हामीले केहि समयको लागि देश छोड्नुपर्‍यो, जुन तीन महिनाको लागि बढाइएको थियो किनभने हामीले सुनवाईको मिति प्राप्त गर्न सकेनौं । एकचोटि हामीले मिति पाउँदा हामी फर्क्यौं । यो पहिलो पटक हामी दुवैले अदालतमा आएका थियौं, र त्यो पहिलो हात एकदम विनम्र थियो । हाम्रो केस अन्त्य तिर सूचीबद्ध गरिएको थियो, त्यसैले हामीलाई थाहा थियो कि त्यस दिन हाम्रो केसको सुनुवाइ हुँदैन, तर हामी आशावादी थियौं । दिनको अन्त्यमा, हाम्रो मुद्दाको सुनुवाइ भएन र स्थानीय चुनावको कारण अर्को महिनाको लागि निर्धारित गरिएको थियो ।
हामीले अर्को सुनुवाई नभएसम्म लेस्लीलाई कसरी देशमै राख्ने र हामीले मुद्दा हार्यौ भने के गर्ने भनेर हामीले सोच्यौ । त्यसपछिको ४८ घण्टा निक्कै सकसपूर्ण बन्यो । हामी लेस्लीको लागि क्याम्पसमा भर्ना लिइरहेका थियौं ता कि उनी विद्यार्थी भिसामा लामो समयसम्म टिक्न सक्नेछन् आर्को तर्फ हाम्रो सम्भावना कम भएको खण्डमा तयारी गर्न हाम्रो सुटकेसपनि प्याक गर्दै थियौँ । भाग्यवस, हामी केहि दिनमा उनको विद्यार्थी भिसा सुरक्षित गर्न सक्षम भयौं । छुटकारा पाए कि हामी लामो समयसम्म बसिरहेका छौं ।
२३ अक्टुबर २०१७ मा, हाम्रो मुद्दाको सुनुवाई भयो, र हामीले जित्यौं । यो अझै सोच्न को लागी असली महसुस हुन्थ्यो । तनाव, हामी सँधै हाम्रा सुटकेसहरू तयार हालतमा छोड्नुपर्नेछ, हामी कहाँ हुनेछौं भन्ने थाहा नहुने दिन अब सकिए । यस्तो लाग्दछ कि हामी पी डितको भूमिका खेल्दैछौं, जबकि नेपालका धेरै व्यक्तिहरू खराब अवस्थाको सामना गरिरहेका छन् । हुनसक्छ हामीले हाम्रो द्व न्द्व को बारेमा कुरा गर्नु हुँदैन । जब मानिसहरूसँग मुख्य मुद्दाहरू छन् जुन उनीहरू दैनिक आधारमा समाधान गर्छन् । तर जब तपाईं सुरक्षित महसुस गर्न सक्नुहुन्न, अ सुरक्षाको सापेक्षता के हो, यसले धेरै त नाव र पी डा सिर्जना गर्दछ । म ती क्षणहरू सम्झादा अझै पनि आश्चर्यमा पर्छु । विशेष गरी लेस्लीको लागि, जसले नेपाल फर्कने निर्णयमा कहिल्यै शंका गरेन ।
एक केस जित्न र समलिं गी जोडीको रूपमा यो देशमा बस्न सक्षम हुनु भन्दा पनि हामी दुवैले यस यात्राको माध्यमबाट कृतज्ञता र दयाको एक नयाँ भावना पाएका छौं । हामीले समाजमा पहिचान सिर्जना गर्न सक्षम हुन साहस पायौं जुन लिं ग र लैं गिक विविधताको अवधारणासँग अझै संघर्ष गरिरहेका छौ । हामीले यस समाजमा आधारभूत अधिकार प्राप्त गर्न संघर्ष गर्ने सबैसँग एकताको भावना राखेको पाएका छौं । हामीले बुझेका छौं कि समाजमा अर्थपूर्ण परिवर्तन ल्याउन हामी एक अर्काप्रति दयालु हुनुपर्दछ, र सायद समानुभूति र दयाले विश्वलाई एक ठाँउमा पर्नेछ । News By https://www.recordnepal.com/